Fivoriana hamahana ny olan'ny vidim-bary | Primature
Fivoriana hamahana ny olan’ny vidim-bary
4 décembre 2020 30 mars 2021
Mahazoarivo, ny 04 desambra 2020 – Manoloana ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena, izay hita fa misy fiantraikany amin’ny fahefa-mividin’ny vahoaka Malagasy, indrindra ao anatin’izao fotoana iarenanana amin’ny niatrehana ny valanaretina covid-19 izao, dia nampiantso fivoriana maika ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany hariva, hamantarana ny olana misy mba hahafahana mitondra vahaolana.
Niara-nidinika tamin’izany ny minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana; ny minisitry ny Fambolena, Fiompiana ary Jono; ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara; ny solontenan’ireo mpanafatra sy mpamokatra vary; ary ny solontenan’ireo mpivarotra vary ambongadiny.
Raha ny fantatra dia tsy ampy ny vary afarana nefa isika mandalo fotoam-pahavaratra ankehitriny ka mihena ihany koa ny vokatra eto an-toerana, ary rehefa miakatra ny vidim-bary avy any ivelany dia manaraka an’izay fiakarana izay ny vidin’ny eto an-toerana. Teo, araka ny fanazavan’ny Praiminisitra, no tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra amin’ny hampihenana ao anatin’ny fotoana fohy ny vidin’ny vary afarana, ary dia nifanaiky tamin’izany vahaolana izany ny mpivory rehetra. Heverina fa ho hita hatreny amin’ny mpanjinjara ny fidinan’ny vidim-bary, ka ny ministeran’ny varotra no hanara-maso ny fahatanterahan’izany. Nanambara ny Praiminisitra fa tsy azo ekena intsony ny fisian’ ireo izay minia manafina vary sy manararaotra mampiakatra ny vidiny, satria ny hanalefaka ny tsenam-bary no tanjona.
Mikasika ny famokarana eto an-toerana kosa dia hanamafy hatrany ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana ao anatin’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika, dia ny fahafahantsika manajary ny toerana azo ambolem-bary, ny ministera misahana ny Fambolena, ary hanentana sy hizara ny fahaiza-manao eny anivon’ny tantsaha Malagasy, amin’ny alalan’ny fampiasana teknolojia vaovao manaraka ny toetr’andro, mba hampiakarana ny tahan’ny vokatra; tafiditra ao anatin’izany koa ny fanatsaràna ireo sompitra. Nomarihin’ny Praiminisitra fa tsy voatery ho afaka taona maro vao hahita vokatra amin’izany isika fa mety ho ao anatin’ny volana vitsivitsy.
Raha fehezina dia tsy tokony hihoatra ny 550 ariary ny vidin’ny vary iray kapoaka, eny an-tsena, ary fantatra fa maherin’ny 100.000 taonina ny vary ho tonga eto an-toerana alohan’ny faran’ity volana ity ka antenaina fa hanalefaka ny vidim-bary izany, manomboka rahampitso.
← Tatitra ankapobeny 2020 teo anivon’ny Tafika Malagasy
Conseil du gouvernement du Mercredi 09 Décembre 2020 →
Fitsidihana ny BNGRC sy ny Centre Opérationnel ao amin’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena